Shiinaha WHIMS warshad iyo alaab-qeybiye |Huate
Codsiga:Waxaa loo isticmaali karaa in processing qoyan - 1.2 mm (- 200 mesh of 30 ~ 100%) macdan cas (hematite iyo limonite, siderite, iwm), ore manganese, ilmenite, chromite, tungsten ore iyo noocyada kale ee macdanta magnetic daciif ah. iyo macdano macdan ah, sida quartz, feldspar, nepheline ore, kaolin si looga saaro birta wasakhaysan iyo nadiifinta.
1).Xoogagga birlabeedka ugu badan: 20000GS.
2).Badbaadinta biyaha ugu yaraan 8000 mitir kuyuub ah sannadkii.
3).Waxaa lagu xakameyn karaa 30 ℃.
4).Nidaamka qaboojinta saliidda si loogu beddelo qaboojinta biyaha hore.
5).Qaab-dhismeedka is haysta, fududahay in la rakibo oo lagu shaqeeyo.
6).Gariiradda xiisaha leh ayaa gebi ahaanba lagu rusheeyaa saliidda beddelka si ay u kordhiso wakhtiga adeegga.
Jaantuska Habka Kala Saarida
Patentbarta hal-abuurka farsamada 1
Naqshadaynta gaarka ah ee gariiradda xiisaha leh, waxaa jira daldaloolo ka dhex jira gariiradaha dabaylaha kuwaas oo siiya marinka saliidda qaboojinta.Kordhi aagga kala firidhsan iyo marinka saliidda qaboojinta.Kulul isweydaarsiga degdega ah.Kor u kaca heerkulka gariiradda waa wax aan ka badnayn 30 ℃, heerkulka hooseeya ee kor u kaca qabow iyo kulul, farqiga duurka magnetic waa yar yahay, marka la barbar dhigo xoogga goobta magnetic, hoos u dhigista awoodda kicinta 20%, badbaadinta korantada 45000 KWh / sanadka.
Qaab dhismeedka si buuxda loo xidhay, caddaynta boodhka, caddaynta qoyaanka, heerkulka sare u adkaysta, waxay ku shaqayn kartaa jawi adag.
Qaab dhismeedka gariiradda iyo jaantuska mabda'a qaboojinta
soo saarayaasha kale (jiilka kowaad) ee kirishbooyada godan biyaha qaboojinta
1. guryaha gariiradda 2. biyo qaboojinta 3. kirishbooyada godanwarshado kale (jiilka labaad) oo ka mid ah gariiradaha qaboojinta biyaha
1. Guryaha gariiradda 2. biyaha qaboojinta 3. gariiradaha badan waxaa ka buuxsamay biyo 4. Gacan-biyood
Shandong Huate (jiilka saddexaad) gariiradaha qaboojinta saliidda ayaa lagu shubaa saliid
1. Guryaha gariiradda 2. marinka saliidda (saliid qaboojinta) 3. Saliid wareeg ah oo hal lakab ah
Qodobka hal-abuurka farsamada ee Patent 2
1. Nidaamka qaboojinta wuxuu qaataa qaab-dhismeedka wareegga wareegga si buuxda loo shaabadeeyey, roob-ilaaliye, boodh-celin, ka-hortagga, ku habboon dhammaan noocyada jawiga qallafsan.
2. Qabo qaboojiyaha hawada qaboojiyaha, kontoroolka caqliga leh, heerkulka gariiradda kicinta waa joogto, isbedbeddelka goobta magnetic ugu yaraan (in ka yar 2%) ee habka qaboojinta, soo-saareyaasha kale ee gudaha ayaa ka dhigaya heerkulka gariiradda mid aad u sarreeya, isbedbedelka goobta magnetic gaaro 15% ~ 30%, kaas oo waxay saameyn weyn ku leeyihiin tusmooyinka dhaymada macdanta.
3. Iyada oo leh bamka saliidda beddelka qulqulka weyn ee qulqulka, xawaaraha wareegga degdegga ah, beddelka kulaylka degdegga ah.
jaantuska nidaamka qaboojinta
Nidaamka qaboojinta saliidda ee qasabka ah waxaa ka mid ah gariiradda dabaysha, tuubada saliidda laga soo galo, xariiqda soo laabashada, qaboojiyaha, bamka wareegga saliidda, mitirka socodka, valve socodka, heerkulbeegga, haanta saliidda la isku qurxiyo, qalabka neefsiga, iwm.
Hababka xulashada: sida caadiga ah waxaan ku dooranaa qalabka iyadoo ku saleysan awoodda xoogga saarista.
Fiiro gaar ah:xogta cas waxay ka dhigan tahay meduim xoojinta sare ee kala soocida magnetka.
Hore: Jiilkii ugu dambeeyay ee caalamiga ah 1.8T qaboojinta uumi-baxa whiMS
Xiga: Taxanaha RCSC Superconducting Birta Kala-duwayaasha
Taxanaha RCDA Fan-qaboojinta Electromagnetic Separator
Taxanaha CTDM Multi – Cirifka Tiirka Magnet...
Taxanaha HJ Mechanical Super Fine Pulverizer
Taxanaha RCYPIISIs-Nadiifinta Joogtada ah Magnetic I...
Hal-wade-Wadista Cadaadis Sarreeysa Roller Mill -...